Mesa 17.0.2 yave kuwanikwa Ubuntu 16.04.2 uye Ubuntu 16.10 | Linux Vakapindwa muropa
Mazuva ekupedzisira anga achinetsa kune Canonical uye nevanogadzira Ubuntu. Kuvhurwa kwe Yekupedzisira beta yeUbuntu 17.04 yakaratidza kuti vashandisi veinotevera Ubuntu vhezheni vanozove neMESA 17.0.2 nepo vhezheni yechinyakare uye iyo LTS vhezheni yacho isingave nayo. Uyezve, vashandisi vaona vhezheni mushure mevhezheni, Ubuntu yakabvisa iyo yekare asi yakagadzikana vhezheni dzeMESA.
Izvi zvinokonzeresa vashandisi veGamer Ubuntu kuve nematambudziko nemamwe mitambo kana nemamwe mashandisiro.
MESA 17.0.2 iri paUbuntu 16.10 nekutenda kune wekuvandudza Ubuntu
Nekudaro, nekuda kwevagadziri veUbuntu, MESA 17.0.2 ichokwadi mune zvekare shanduro dzeUbuntu. Vazhinji venyu muchashamisika kuti zvinogoneka sei.
Izvi zvinokonzerwa nemugadziri Timo Aaltonen kuti akaisa mune yake yekuchengetera Mesa 17.0.2 yeUbuntu 16.04.02 uye yeUbuntu 16.10, ndiko kuti, yezvinyorwa zvekare zveUbuntu. Iyo repository ndeyako, saka vashandisi veUbuntu havana iyo seyakajairwa, asi isu tinogona kuiisa zviri nyore nekuvhura terminal uye typing zvinotevera:
Mushure meizvi, iyo Ubuntu vhezheni ichavandudzwa neazvino Ubuntu vhezheni uye isu hatidi kuzotangazve iyo pc kunze kwekunge tichifanira kutangazve nekernel nyowani. Timo Aaltonen anoratidza kuti kana tiine dambudziko neshanduro, ngatiratidzei, chimwe chinhu chinonyatso batsira vhezheni dzekare dzeUbuntu kuti dzive neshanduro yeMESA yazvino.
MESA iseti ye Vhura sosi yekushandisa uye maraibhurari anotibvumidza kumhanya chero mutambo wevhidhiyo paLinux pasina matambudziko uye nekushanda kumwe chete uye mashandiro senge nemamwe masisitimu anoshanda.
Nekudaro, kune vazhinji zvakakosha kuti uve kana kusave neyazvino vhezheni yeMesa mukugovera kwayo. Neraki iyo nyaya yeUbuntu haina kuiswa pachena, kune zvimwe zvekugovera izvo zvatove neazvino vhezheni uye kuti vanoivandudza pamwedzi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Mesa 17.0.2 yave kuwanikwa Ubuntu 16.04.2 uye Ubuntu 16.10
Juan Carlos Navarrete Gordillo akadaro
Ndeipi login iri mumufananidzo? Kwakanaka
Pindura Juan Carlos Navarrete Gordillo
George Flowers akadaro
Ini ndinobatanidza chirevo chako, iko kupinda kupi iko?
Pindura Jorge Flores
Ini ndinobatanidza mhinduro yako Ndeipi login iri iyo?
Iko kubatana kwe8 kubatana
Iyi ppa uye ichasanganisira iyo nyowani vhezheni kana iwe unofanirwa kugara uchivawedzera nemaoko?